Wondershare SafeEraser maka Mac Review - Dee gị ihe ebe a
SafeEraser maka Mac
N'ihi na Business
Couldnt ịbụ ihe afọ ojuju .... site Tugba Kilic
N'ikpeazụ a omume na a ahịa ọrụ 100% agbaso gị anya. Ga-amasị m na-ekele ndị otu nke ukwuu n'ihi na ma ngwaahịa na ngwa ngwa azịza ha na-ewetakwara m ịrịba arịrịọ. Definetely ruru ego na bara oké uru.
Great ahịa nkwado site Jano
Gbalịrị ngwa. Ma m zụtara na-ezighị ezi version (PC, kama Mac) site na mpụga na saịtị. M gwara Jeremy si ahịa nkwado o ngwa ngwa Switched m zuo Mac version. Ịchekwa m furu efu-ego na ihe ọ bụla ụdị ndakpọ olileanya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị anụ olu m na-ede ọzọ nyochaa, mgbe ahụ App ga na-arụ ọrụ zuru okè. Ikpe ikpe si ahịa suuport Otú ọ dị, nke a kwesịrị ezigbo ụlọ ọrụ ịzụta ngwaahịa si. Oge ihichapu ụfọdụ data ugbu a.
Mgbe nchegbu banyere data nche site Kim
M ji ya ihichapu niile ehichapụ faịlụ na m iPhone, o mere ezigbo ọrụ. The interface bụ obere dị iche iche si Windows version.
Magburu onwe software site Sophie
M \_ sitụrụla tụrụ anya na Mac version ruo ogologo oge. N'ikpeazụ, ọ \_ 's ebe a.
Mere nke ọma site Cathy
Ị mere nke ọma. Ọ mere ezigbo ọrụ ná erasing niile data na m ochie iPhone. N'ikpeazụ, m \_ 'Eh mgbe nchegbu banyere nche nke m data.
Na Mbụ 1 Next
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac)
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka maka Mac ọrụ. Mụtakwuo
Wondershare TunesGo Ochie (Mac) NEW
Full nnwere onwe nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad na iPod ka iTunes Library on Mac. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 9, ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus Mụtakwuo
Wondershare MobileTrans Maka Mac NEW
Nyefee n'elu niile nke gị data - gụnyere kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, photos, music, videos na ngwa - na-adịghị ize ndụ ma ọ bụ ọnwụ nke àgwà. Mụtakwuo